The Green Snake (2019) | MM Movie Store
အခဈြကွောငျ့ ဘယျနှဈယောကျမြား ပြျောရှငျပွီးပွီလဲ ? ဘယျနှဈယောကျမြား ဝမျးနညျးကွကှေဲပွီးပွီလဲ ? ကိုယျစတေးလိုကျတဲ့ အခဈြက သူ့အတှကျ တကယျရော ပြျောရှငျနိုငျပါ့မလား…. ဝနျထုပျဝနျပိုးဖွဈနမေလား….မွှဖွေူ မွှစေိမျး ပုံပွငျလေးကတော့ ရုပျရှငျခဈြပရိသတျကွီးအတှကျ မစိမျးတဲ့ပုံပွငျတဈခုပါ ။
အခုက မွှစေိမျးမယျ ရဲ့အကွောငျးလေးပါ။ အတိုကျခိုကျခံရတဲ့ မွှစေိမျးမယျက လော့ခြှမျးမွဈထဲကို ကသြှားတဲ့အခါ လော့ခြှမျးမွဈရဲ့ ကူးတို့နတျသား ဖွဈတဲ့ “ရှမျယာ” ရဲ့ကယျတငျခွငျးကိုခံခဲ့ရပါတယျ ။
အခဈြအတှကျနဲ့ ကူးတို့နတျသား အဖွဈအပွဈပေးခံထားရတဲ့ “ရှမျယာ” က ဟိုးအရငျက ကြေးဇူးတရားကွောငျ့ မွှစေိမျးလေးကို အသညျးနှလုံးစတေးပွီး ကယျတငျပေးခဲ့ပါတယျ။ခဈြသူ “ရှမျယာ” ကို ရှာဖှဖေို့ နှဈပေါငျး ၃၀၀ လောကျအခြိနျကုနျပွီးနောကျမှာ “မုယောငျ” လို့ချေါတဲ့ မိနျးကလေးက လော့ခြှမျးမွကေို ရောကျရှိလာပါပွီ ။
သူ့အခြိနျတှကေို စတေးပွီး ရှာဖှပွေီးမှ တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ “ရှမျယာ” ကအခုတော့ နှလုံးသားမရှိတော့ဘူးတဲ့လား …..သှေးအေးအေးနဲ့ မိခငျရဲ့ သှေးကွှေးကိုဆပျဖို့ စောငျ့နတေဲ့ စောငျးသမားလေး “ရှမျးရှို့” ကတော့ “ရှမျယာ” ကိုသတျဖို့ပွငျဆငျပွီးကာမှ မွှစေိမျးလေး ရဲ့လှပမှုအောကျ လဲကခြဲ့ရတဲ့အခါ…..
နှဈတဈထောငျမှာတဈခါပဲ ထှကျပျေါလာမယျ့ လော့ခြှမျးမွရေဲ့ ကငျြးကနျပုလဲ ကိုရယူဖို့ ကွိုးစားနကွေတဲ့ အခြိနျလေးမှာ “မွှစေိမျးမယျ ၊ ကူးတို့နတျသား ရှမျယာ ၊ အခဈြကွီးသူ မုယောငျ နဲ့ သားလိမ်မာလေး ရှမျးရှို့” တို့ကွား ဘယျလိုမြိုး ရဈပတျနှောငျဖှဲ့မှုတှနေဲ့ ပရိသတျကိုဖမျးစားသှားမလဲဆိုတာတော့ … ဆကျပွီးကွညျ့လိုကျတော့နျော ။ ။
အချစ်ကြောင့် ဘယ်နှစ်ယောက်များ ပျော်ရွှင်ပြီးပြီလဲ ? ဘယ်နှစ်ယောက်များ ဝမ်းနည်းကြေကွဲပြီးပြီလဲ ? ကိုယ်စတေးလိုက်တဲ့ အချစ်က သူ့အတွက် တကယ်ရော ပျော်ရွှင်နိုင်ပါ့မလား…. ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေမလား….မြွေဖြူ မြွေစိမ်း ပုံပြင်လေးကတော့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် မစိမ်းတဲ့ပုံပြင်တစ်ခုပါ ။
အခုက မြွေစိမ်းမယ် ရဲ့အကြောင်းလေးပါ။ အတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ မြွေစိမ်းမယ်က လော့ချွမ်းမြစ်ထဲကို ကျသွားတဲ့အခါ လော့ချွမ်းမြစ်ရဲ့ ကူးတို့နတ်သား ဖြစ်တဲ့ “ရွှမ်ယာ” ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ် ။
အချစ်အတွက်နဲ့ ကူးတို့နတ်သား အဖြစ်အပြစ်ပေးခံထားရတဲ့ “ရွှမ်ယာ” က ဟိုးအရင်က ကျေးဇူးတရားကြောင့် မြွေစိမ်းလေးကို အသည်းနှလုံးစတေးပြီး ကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ချစ်သူ “ရွှမ်ယာ” ကို ရှာဖွေဖို့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ လောက်အချိန်ကုန်ပြီးနောက်မှာ “မုယောင်” လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးက လော့ချွမ်းမြေကို ရောက်ရှိလာပါပြီ ။
သူ့အချိန်တွေကို စတေးပြီး ရှာဖွေပြီးမှ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ “ရွှမ်ယာ” ကအခုတော့ နှလုံးသားမရှိတော့ဘူးတဲ့လား …..သွေးအေးအေးနဲ့ မိခင်ရဲ့ သွေးကြွေးကိုဆပ်ဖို့ စောင့်နေတဲ့ စောင်းသမားလေး “ရှမ်းရှို့” ကတော့ “ရွှမ်ယာ” ကိုသတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးကာမှ မြွေစိမ်းလေး ရဲ့လှပမှုအောက် လဲကျခဲ့ရတဲ့အခါ…..
နှစ်တစ်ထောင်မှာတစ်ခါပဲ ထွက်ပေါ်လာမယ့် လော့ချွမ်းမြေရဲ့ ကျင်းကန်ပုလဲ ကိုရယူဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ အချိန်လေးမှာ “မြွေစိမ်းမယ် ၊ ကူးတို့နတ်သား ရွှမ်ယာ ၊ အချစ်ကြီးသူ မုယောင် နဲ့ သားလိမ္မာလေး ရှမ်းရှို့” တို့ကြား ဘယ်လိုမျိုး ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မှုတွေနဲ့ ပရိသတ်ကိုဖမ်းစားသွားမလဲဆိုတာတော့ … ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့နော် ။ ။